ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုး - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
20-02-2011, 07:19 AM
ကျွန်တော် ကို ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုး (Embroidery ) လုပ်ငန်းနဲ့ ပါတ်သပ်လို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သိသမျှ နားလည်သမျှကို မျှဝေပေးပါမယ်
ပထမဆုံး အသုံပြုရတာလွယ်ကူဆုံး Wings Xp eXPerience 2.50 Applications လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
Applications Driver wings-experience-250 မူလလင့် wings-experience-250-portable မူလလင့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 24 ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ဇာနည်စိုး, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, မောင်နေလင်းဇော်, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, arkaraung, bonge, g00gle, khinmimihtet, kyaukphyu, ma mee, mgwinhlaing, minthike, myitthathar, pannuko, tree lover, tu tu, wahgyi, Ye Aung, yelinoo, zinkomin
ပို့စ် 20 ခုအတွက် 53 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုး
စမောလ်ဘေ့စ်နက်စ် လုပ်လိုသူများရှိနိုင်သော်လည်း (ကျွန်တော်အပါအ၀င်)
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ tree lover အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, မောင်နေလင်းဇော်, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, arkaraung, g00gle, kyawminkhoung, minthike, pannuko, tu tu, yelinoo
tree lover ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by tree lover
Emb လုပ်ငန်းဆိုတာ အဝတ်အထည် /အသုံးအဆောင်များများ မှာအပ်ချည်နဲ့ပုံလေးတွေထိုးတဲ့အလုပ်ပါ
အဲဒီလိုပုံထဲကိုအပ်ချည်ဘယ်လိုသွင်းလဲ ဘယ်လို စက်တွေနဲ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, နီထွန်းဦး, တေလေငှက်, မောင်နေလင်းဇော်, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, Ange, arkaraung, bonge, g00gle, minthike, minthumon, pannuko, tree lover, tu tu, yelinoo
Template က နောက်ခံအရောင်ရွေးရန်
Blackdrop က အပ်ချည်ထဲ့မည့်ပုံကိုထဲ့ရန်
A Objects and graphics များအား ရွေးရန် ရွှေရန် အရွယ်အစားပြုပြင်ရန်သုံးသည် B Outline များကို ပြုပြင်ရန်သုံးသည် C Stitch များကို ပြုပြင်ရန်သုံးသည် D အပ်ချည်ထည့်ရန်သုံးသည်
E Autoအပ်ချည်ထည့်ရန်သုံးသည် F စာရိုက်ရန်သုံးသည် G Objects များကို ခွဲရန်သုံးသည် H မြင်ကွင်းချဲ့ရန် / မြင်ကွင်းကျဉ်းရန်သုံးသည်
Last edited by kyawminkhoung; 01-03-2011 at 08:27 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, သန့်ဇင်ဌေး, ဦးအသေးလေး, ဇော်ရဲပိုင်, တေလေငှက်, မောင်သံသရာ, မြင့်မိုရ်, Ange, arkaraung, bonge, g00gle, mgwinhlaing, minthike, minthumon, myitthathar, pannuko, tree lover, tu tu, yelinoo, zo
A နောက်ခံအရောင်ပြောင်းရန်နှင့် အပ်ချည်ံအရောင်ပြောင်းရန် B အချည်ဖြတ်ရန် C Machine အားရပ်ရန် D အစမှာ အပ်ကိုတင်ထားရန်
E Machine Frame အားထုပ်ရန် /သွင်းရန် F Sequin ဒီဇိုင်းထဲ့ရန် G အပ်ချည်အစသက်မှတ်ရန် H အပ်ချည်အဆုးံသက်မှတ်ရန်
အသုံးနဲသော tool များကိုကျွန်တော် မရေးထား၍ကျော်ပြထားပါတယ်
ကျွန်တော်မြန်မာမိသားစု Logo ကိုနမူနာထား၍ဆွဲပြထားပါတယ်
ကျွန်တော် www.myanmarfamily.Org နဲ 2011 ကိုfontပြောင်းထားပါတယ်
ကျွန်တော်ဆွဲထာတဲ့ data ကိုလဲတင်ပေးထားပါတယ် ဘယ်လိုအပ်ချည်ကိုသုံးထားတာ Object တစ်ခုပြီတစ်ခုဘယ်လိုစီထားတာ လေ့လာဖို့ပါ
myanmarfamily stitch data
emb machine မှာ ဘယ်လိုမျိုးစချုပ်လဲဆိုတာ video လေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်
ကျွန်တော်ဆွဲထာတဲ့ data ဖိုင်ထဲမှာ wings xp / Auto cad / corel Draw / Adobe Illustrator file တွေထည့်ပေးထားပါတယ်
ကျွန်တော် ရေးသားနေတဲ့ Emb အပိုင်းက အခုမှစတင်လေ့လာမည် ညီအကိုများအတွက်နဲနဲအခက်အခဲရှိပါမည်
Emb လေ့လာတော့မည့််ဆိုအခြေခံ Auto cad / corel Draw / Illustrator Software တွေကိုအသုံးပြုနိုင်လျှင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်
Emb အလုပ်ဆိုတာက ရွေချည်ထိုး ငွေချည်ထိုး ထိုးတဲသဘောနဲ့အတူတူပါပဲ
မြန်မာများက ရွေချည်ထိုး ငွေချည်ထိုး ကကိုလက်နဲ့ထိုးကြတာပါ
ချည်ထိုးပုံများမှာ ရွေချည်ထိုး ငွေချည်ထိုး( sequin ) ထဲ့ထိုးသည့်ပုံရယ်( sequin )မပါပဲချည်ပဲထိုးတဲပုံရယ် ( sequin )အစား ပိတ်စထဲ့ထိုးတာတို့အစုံရှိပါတယ်
အခုနောက်ပိုင်း က Software များ အသုံးပြု၍ Emb Computer machine နဲ့ဘယ်လိုထိုးလဲဆိုတာလေ့လာဖို့ပါ
ကျွန်တော် ရေးသားထားသည့်အကြောင်းအရာများကို အခြားအင်တာနက်စာမျှက်နှာများမှာဖေါ်ပြလျှင်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ( သို့ ) ကျွန်တော် အမည်အားဖေါ်ပြပေးရန်တောင်းဆိုပါတယ်
ကျွန်တော် eXPerience_2.5_Software အသုံးပြုပုံများကိုကျွန်တော်ဘာသာလေ့လာ၍အသုံးပြုနေရလိုအသုံးပြုပုံများလွဲမှားနေရင်ခွင်လွတ်ပေးပါ
ကျွန်တော်နားလည်သလိုမျိုးနဲ့ပဲရေးသားပေးပါမယ် eXPerience_2.5_Software ထဲမှာ eXPerience_2.5_manual လဲပါပါတယ်
eXPerience 2.50 မှ emb machine file အဖြစ်သိမ်းဖို့အတွက် file / save as / ပါ save as type မှာ Tajima *.dst ကိုရွေးပေးပါ
Tajima file က emb machine အားလုံးနီးပါးအလုပ်လုပ်ပါတယ် *.dst ကိုရလျှင်မိမိသုံးမည့် emb machine ရဲ usb / floppy ထဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ ဒီနည်ကအလွယ်နည်းပါ
multiple save တဲ့နည်းလဲရှိပါတယ် multiple file နဲ့သိမ်းမည်ဆိုလျှင် window /Active designs မှာ save ပါ multiple နဲ့သိမ်းလျှင် rename ပေးလိုမရပါ
Auto rename G001 / G002 လုိ့ သူပါသာပေးပါတယ်
Create stitch အပိုင်းနှင့်Object properties အပိုင်းကိုဆက်လက်ရေးသားပေးပါမည်
ကိုပျင်း, နီထွန်းဦး, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, တေလေငှက်, မြင့်မိုရ်, Ange, arkaraung, azp09, bagothar85, bonge, g00gle, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, minthumon, Myint MO, myitthathar, pannuko, tu tu, Ye Aung, yelinoo, zo
Kyaw Swar 71
ပို့စ်6ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုရေ soft ware ကိုဘယ် link ကနေ download လုပ်ရမှာလည်းဟင်း၊စိတ်ဝင်စားလို့ပါ၊ပြန်စာစောင့်နေမယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Kyaw Swar 71 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
mgwinhlaing, myitthathar, pannuko, yelinoo, zo
Kyaw Swar 71 ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Kyaw Swar 71
Driver ကhhd32.exe ဆိုတာအောက်ဆုံးမှာအဲဒါကိုဒေါင်းပါ
Last edited by kyawminkhoung; 13-06-2011 at 06:28 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, Ange, arkaraung, bagothar85, g00gle, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, minthumon, myitthathar, pannuko, tu tu, yelinoo
22-06-2011, 03:32 PM
kyawminkhoung, mgwinhlaing, myitthathar, pannuko, yelinoo
ကျွှန်တော်သုံးတာက wilcom es designer 9.0 ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ saiaikbee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, mgwinhlaing, minthike, myitthathar, tu tu, yelinoo
စက်ကြီးပန်းထိုးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ် ရေးပေးပါလားခင်ဗျ..
ကျွန်တော်ညီမက ဒီဇိုင်နာအလုပ် လုပ်တယ် ပြောပါတယ်...
ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာ ပန်းထိုးစက်လဲ ၀ယ်ချင်တယ်တဲ့... ဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲမသိဗျာ.
မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်ဈေးကြီးတယ်ကြားတယ်ခင်ဗျ...:bh:
ဒီနိုင်ငံမှာလဲ ဘယ်မှာမှ မေးလို့မရဘူးဗျာ..
ကူညီပေးပါအုံး... ဟီးးးး စက်ပုံစံကို မမြင်ဖူးတာရယ်......
ထပ်မရေးတော့တာကတော့ windows7ပဲသုံးနေလို့ပါ .. ပန်းထိုးတဲ့ software က Xp မှာပဲရလို့ပါ ..
အဲဒီလိုစက်မျိုးဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ ( ၂၅,၀၀၀၀၀ ) လောက်ရှိမယ် သူကအပ်တစ်ချောင်းပဲပါတယ်...
ဒါမျိုးက ( သိန်း ၁၀၀ ) လောက်ရှိမယ်.. အပ် ၁၂ ချောင်းပါတယ်
ဒါလဲ ၁၀၀ ကျော်မယ်.. အိမ်းတွင်းသုံးမယ်ဆိုသူကအကောင်းဆုံးပဲ.. အကြမ်းလဲခံတယ်
စီပွားဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုစက်တွေဝယ်သုံးပါ... ဈေနဲနဲပေါတယ် korean လုပ်ပါ.... ဒီဇိုင်းရေးဆွဲချင်ရင်တော့ kyawminkhoung@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ.... အပ်ရေ ( ၁၀၀၀ ) ကို မြန်မာငွေ ( ၂၅၀၀ ) ကျပ်ယူပါတယ်
ပုံတွေမှာအပ်ရေ နဲ့ အတိုင်းကိုရေးပြထားပါတယ်
ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောတာမိသားစုကညီအကိုတွေစိတ်မဆိုးပါနဲ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့စီပွားရေးလေးဖြစ်နေလို့ပါ... ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ software က ထိုင်းမှာ copy ဝယ်ရင်တောင် မြန်မာငွေနဲ့ ၂သိန်းကျော်ပေးရပါတယ် သူတစ်ခုထဲနဲ့ တစ်ဘဝ လုံးသုံးလို့ရပြီ... ကျွန်တော်သူဋ္ဌေးဆိုဒါကိုသုံးတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီ.. စက်တစ်လုံးထဲနဲ့လုပ်တာ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ စက်အလုံး ၂၀ ကျော်ပိုင်သွားပြီ စက်တစ်လုံးတန်ဖိုးက မြန်မာငွေ သိန်း ( ၁၀၀၀ ) ကျော်တန်တဲ့ tajima ၁၈ခေါင်းစက်တွေပါ
arkaraung, g00gle, minthike, tu tu, yelinoo, zo
27-06-2012, 08:59 PM
Originally Posted by akyikoung
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကျော်မင်းခေါင် တွေ့တုန်းလေးတလက်စထဲပေါ့နော် စက်ကြီးပန်းထိုး အသုံးပြုပုံလေး မြန်မာလိုစာအုပ်လေး ရှိရင်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ ကျွန်တော်အဲတာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ ကျွန်တော်မေးလ်က akyikoung@gmail ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို
ဒါက Wilcom software နဲ့ ပန်းထိုးတဲ့ tutorial video အပိုင်း ၂၀ ရှိတယ်..လေ့လာကြည့်ပါ.. သူက အကောင်းဆုံးလိုပြောလို့ရတယ်. နဲနဲတော့ခက်မယ်...
Ps ..ပန်းထိုးရန်အပ်ချည်ထဲ့သူသည် စက်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိရပါမယ်..စက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာပြီးမှပန်းထိုးရန်အပ်ချည်ထဲ့ကအကောင်းဆုံးပုံကိုရမှာပါ...အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
akyikoung, arkaraung, g00gle, ma mee, minthike, tu tu, yelinoo, zo
အောက်က hhd32.exeကိုဒေါင်းလိုက်တာ အောက်ကအတိုင်း ပေါ်လာလို့ခင်ဗျ...
အကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဆော့ဝဲလ်runပုံနဲ့ အသုံးပြုပုံလေးများကို ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ...
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ma mee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, g00gle, kyawminkhoung, yelinoo
ဆော့ဝဲလ်runပုံ video နှင့် HASP4_driver ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေ
Windows xp အတွက်သာ
ချိတ်အမိုက်စားလေးတွေနော် ဈေးကအတော်ကြီးတယ်.. အဲ့ဒီလိုစက်နဲ့လုပ်ထားတာ
အဲဒီက patterns လေးတွေလဲမဆိုးဘူးနော်.. သုံးတက်ရင် Clone လိုက်ပေါ့
Last edited by kyawminkhoung; 23-09-2012 at 11:00 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
arkaraung, g00gle, khinmimihtet, tu tu, yelinoo
မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ....
google Drive ကိုနှိပ်လိုက်တော့
You are signed in as ark.....@gmail.com, but you don't have permission to access this item. You can request access from the owner or chooseadifferent account. Learn more
Request access Chooseadifferent account[/b]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ arkaraung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒေါင်းးလို့ရပါပြီ ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပေးပါ . ...................................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခု ဒေါင်းလို့ ရသွားပါပြီခင်ဗျ...
ဒီထက်မက.. တက်မြောက်ထားသော အသိပညာ အတက်ပညာများကို မျှဝေသောသူဖြစ်ပါစေခင်ဗျ...
အစ်ကိုရေ ဒီမှာပဲမေးလိုက်အုံမယ်နော် ။ ကျွန်တော်သိချင်တာက အင်းဂျီမှာ တံဆိပ် ရိုက်တဲ့ စက် ကို သိချင်တာ အစ်ကို။ အဲဒါ ရှိလား မသိဘူးနော်.ကျွန်တော်က မသိလို့ပါ. ရှိရင်လဲ ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ သိချင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ စက်ပေါ့ အစ်ကိုရာ......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ NAY ZAR AUNG အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အော် ကျွန်တော်ပြောတာက ဆေးရောင်ရိုက်တဲံ့ဟာကိုပြောတာပါချင်ဗျာ.
Originally Posted by NAY ZAR AUNG
Last edited by kyawminkhoung; 03-10-2012 at 12:22 PM..
NAY ZAR AUNG, yelinoo
အစ်ကိုရေ အမျိူးသား အမျိုးသမ၊ီးဝတ်အကျီင်္ ဘလောက် ဒီဇိုင်း စာအုပ်လေးတွေ ဆော့ဖ်ဝဲ လေးတွေ ရှိရင် တင်ပေးပါဦးလား
ပြပွဲမှာ ကြည့်တုန်းက အမျိူးသား အမျိုးသမ၊ီးဝတ် အကျီင်္ ဒီဇိုင်း ဆော့ဖ်ဝဲ က သုံးမျိုးပေါင်း ဒေါလာ တစ်သောင်းတောင်မှ ရှိတယ်လေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝယ်နိုင်မှာလည်းလေ
23-12-2012, 02:45 PM
အဲဒီ ၂ခုကအကောင်းဆုံးပဲ သူကိုသုံးရင် 3D ဆိုတာဘာလဲကိုလေ့လာထားရမည်
g00gle, yelinoo, zo
25-12-2012, 02:19 AM
အကိုဆွဲထားတဲ့ DATA (myanmarfamily stitch data) ဖိုင်က ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ko gyi aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by ko gyi aung
ကြာသွားပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှာမတွေတော့ပါဘူး ..... ပုံတွေကများတော့ရှာလို့တွေရင်ပြန်တင်ပေးပါမယ်
အောင်ဗလ, arkaraung, g00gle, yelinoo